Iindaba - Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
Umbala woMlilo woMlilo
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
Njengoko sonke sisazi, ilangatye emthini ngokubanzi limthubi kwaye lelombala oqhelekileyo, idangatye limthubi okanye libomvu kancinci, into abantu abayaziyo njengesiqhelo ukusuka ekuqaleni ukuya kutshisa kude kube sekupheleni. Ngokunjalo abantu bayayisebenzisa le mibala, kwaye abanalo uluvo olukhethekileyo okanye olungalibalekiyo emlilweni de kuduke ilangatye.
Isizathu sokuba abantu bathande ukubasa umlilo weplanga kukuba abantu akufuneki bonwabele ubushushu obuziswe ngumlilo wamaplanga, ngakumbi ebusika, kodwa baziva umoya othambileyo kunye noswiti, wothando nothe ngqo oziswe lidangatye.
Ngeentsuku zeveki, isikhumbuzo okanye imithendeleko, abantu abadala, abantwana, abahlobo, iikati, izinja, indlu efudumeleyo eneziko elishushu, ulwandle kunye nemililo, zonke ezo zinto zisenza sizive kamnandi. Ewe, ngeli xesha, ilangatye lethu liya kukhupha nomtsalane walo owahlukileyo, umlingo oluhlaza okwesibhakabhaka. Mane ubeke ezi bhegi zincinci zinombala wedangatye emlilweni, kwaye idangatye litshintshe ukusuka kumbala otyheli okanye obomvu ukuya kohlaza okwesibhakabhaka kwangoko. Iyamangalisa.
Le yimveliso yethu esiyibiza ngokuba "lilangatye eliluhlaza okwesibhakabhaka" kwaye idangatye eliluhlaza elingqungqa liyonwabele eyona ntsapho ilungileyo okanye ulonwabo lwepati kwihlabathi nabantu lude lutshise.
Idilesi:Indawo yeShanpu, kwiNgingqi yaseRaoyang, kwisiXeko saseHengshui, e-Hebei China
Ifowuni yasimahla: +86 18630173657
NgoJuni 03, 2019
Njengoko sonke sisazi, ilangatye emthini ngokubanzi limthubi kwaye yeyombala oqhelekileyo, idangatye limthubi okanye libomvu kancinci, yintoni abantu abayindumasi ...
Imisebenzi yomlilo yamakhandlela ikhekhe ikwabizwa ngokuba yimililo encinci ephathwa ngesandla. Xa zisetyenziswa, zifakwa kwikhekhe (okanye zisetelwe esandleni sakho) kwaye zalayita w ...